Dr. Tint Swe's Writings: Pregnancy Myths ကိုယ်ဝန်ဆောင် အယူအဆ အလွဲအမှားများ
1. ဆရာ သမီးနာမည်က့့ ပါ။ ကိုယ်ဝန်က ၄ လရှိပါပြီ။ သူများတွေကပြောတယ် နွားနို့သောက်ရင် အထဲကကလေး မွေးလာရင် အသားဖြူ တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဆရာ။
2. ကျွန်မအသက်က၂၃ နှစ်ပါဆရာ အခုကိုယ်ဝန် လွယ်ထားပါတယ်ဆရာ။ မီးတွင်းထဲမှာ ဘယ်လို နေထိုင်သင့်လဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။ လူကြီးတွေကပြောတယ် တစ်လတိတိ ခေါင်းမလျှော်ရဘူး ပြောတော့တော်တော်စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ရေကိုင်ရင်တောင် ရေနွေးကိုပဲကိုင်ရမယ်၊ ဆပ်ပြာဆိုလည်း ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာ ပဲကိုင်ရမယ်၊ အဲကွန်းခန်းထဲမနေရဘူး၊ အစားအသောက်ကအစ အစုံမစားရဘူး ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကအမှန်တွေပဲလားဆရာ။ ပြီးတော့ သွေးသားသန့်အောင် ဘယ်လိုအရာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါသလဲရှင်။ မီးတွင်းထဲမှာ သွေးသန့်အောင် အရက် နဲ့ဆေးနဲ့ပါသောက်ရမယ်တဲ့ဆရာ။
3. ဆရာရှင့် သမီး ကိုယ်ဝန်က ၅ လနီးပါးရှိနေပြီလို့ ကိုယ်ဝန်သွားအပ်တော့ Doctor ပြောပါတယ်၊ ကလေး နှလုံးခုန်သံပါ ကြားရပါတယ်တဲ့ဆရာ။ သမီးသိချင်တာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေ ညနေ ၅ နာရီ ကျော်ရင် ရေမချိုးရဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ သမီး အလုပ်ချိန်က နေ့လည် ၂ နာရီကနေ ည ၁၁ ထိ မို့လို့ပါ။ ညနေ ၅ နာရီကျော်ရင် ရေမချိုးရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာ။ နောက် ငှက်ပျောသီးကို ကိုယ်ဝန်ရင့်လာရင် မစားရဘူးတဲ့၊ ကလေးက အထဲမှာထွားနေရင် မွေးရခက်လို့တဲ့ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။
မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။
ကိုယ့်ကလေးတွေ နွားနို့သောက်ချင်အောင် လှည့်ပါတ်လိမ်ညာပြောခဲ့ရတာတွေကို အမှတ်ရလာတယ်။ ဆေးပညာစာကိုတော့ ဆန်းစုမှုတွေလုပ်ထားတဲ့ သူများနိုင်ငံကအထောက်အထားတွေကိုသာရေးပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက ပိုပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပြောကြတယ်။
ငှက်ပျေားသီးလဲ စားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးထွားတာ ကောင်းပါတယ်။ ကလေးဟာ အချိုးအစားကျကျထွားလို့ အမွေးခက်တာ မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းက ရှိသင့်တာထက် ပိုကြီးနေရင်သာ ခက်နိုင်ပါတယ်။
၇။ ကိုဝန်ရှိစ အိပ်ရာထဈေဒနာတွေက မနက်ထမှာသာဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ပါ။ (စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။)